Abenzi beBhodi yePvp
IBhodi yePhepha lePhepha
Ibhodi ye-foam yasimahla ye-PVC
I-pvc celuka ibhodi yegwebu
Ibhodi amagwebu CO-eyandisiweyo
Ibhodi yegwebu yeWPC
umbala webhodi yePVC
iphepha le-acrylic elicacileyo
Iphepha lesipili le-acrylic
Iphepha elimhlophe le-acrylic
amashiti e-acrylic enemibala
iphepha le-acrylic elinqabileyo
Iphepha le-acrylic elikhutshiweyo
I-WPC sintra sheet sheet
Iibhanti ze-acrylic sheet
Ixabiso eliphantsi lamaphepha e-acrylic matt
iphepha lesikhanyisi se-acrylic
iphepha elicacileyo le-acrylic
iphepha leglasi ye-acrylic
iphepha lesilivere le-acrylic
Iphepha le-foam elingu-1mm le-PVC
Iphepha le-15mm le-Forex
Iphepha le-foam le-PVC elinemibala
Ukuxinana okuphezulu kwe-CO-exrued sheet foamex
IBhodi ye-Foam ye-5mm yeCeluka
I-5mm celuka ibhodi ye-foam ye-PVC luhlobo lweBhodi yePhepha le-PVC, elenziwa yinkqubo ye-celuka kwaye yenziwa ngeqonga lokulinganisa. Ibhodi yeCeluka PVC ine-flat, matt crust surface, eyenza iphepha ukuba lomelele, lomelele ngakumbi kwaye lihlale ixesha elide.
Ibhodi ye-foam ye-8mm yePVC
I-8mm ibhodi ye-foam pvc yinkcazo yebhodi ye-celuka pvc foam, ikwangabhodi ye-PVC. Thatha i-polyvinyl chloride njengeyona nto iphambili ekrwada, yongeza iarhente enegwebu, ukudodobalisa idangatye kunye nearhente yokuguga, kwaye wamkele izixhobo ezizodwa ze-extrusion molding. Imibala eqhelekileyo imhlophe kwaye imnyama.
Iphepha le-PVC le-10mm
Sinomzi mveliso ozimeleyo, osenza ukuba sibe ziincutshe kwimveliso yebhodi ye-foam.
Iphepha le-foam le-PVC elandisiweyo
Ibhodi ye-foam ye-PVC eyandisiweyo yiphepha elinobunzima, eliqinileyo le-PVC elisetyenziselwa izicelo ezahlukeneyo kubandakanya imiqondiso kunye nemiboniso, iindawo zokuhlala, ukufakwa kweefoto, uyilo lwangaphakathi, i-thermoforming, iiprototypes, ukwenza imodeli, nokunye okuninzi.
Iphepha le-15mm le-Forex licwecwe elimhlophe, elandisiweyo elincinci le-PVC elinomgangatho weseli ococekileyo kunye nofanayo kunye nomgangatho we-mat. Iphepha le-Forex linezona zinto zilungileyo zoomatshini kunye nomgangatho ophezulu wobungakanani bomgangatho.
Ibhodi yePVC eyandisiweyo eyi-18mm
Ibhodi ye-PVC eyandisiweyo ye-PVC ikwabizwa ngokuba yibhodi emhlophe yePVC kunye nefenitshala yebhodi ye-PVC, enye yebhodi ye-PVC okanye iphepha le-foam le-PVC.
25mm celuka ibhodi
Ibhodi yamagwebu engama-25mm yeyebhodi ye-celuka, kwibhodi yamagwebu ye-PVC eyi-1-30mm yeyibhodi eshinyeneyo, ke le bhodi yobukhulu ilungele ifanitshala, ulwakhiwo, umhombiso kunye nemisebenzi yangaphandle.
Ifenitshala yebhodi ye-foam ye-20mm ye-PVC
I-pvc celuka foam board isetyenziswa ngokubanzi kuMzi-mveliso wefanitshala, kwintengiso kunye nakwizicelo zangaphakathi nangaphandle.
Iphepha lebhodi le-PVC eli-18mm
Isibhengezo: ukushicilela kwi-silika creen, umfanekiso oqingqiweyo, iibhodi zokubonisa, ibhokisi yesibane
Ukwakha upholster: ukuhombisa ngaphakathi nangaphandle, ifomu yokwakha, yahlula indlu
Inkqubo yefanitshala: ifanitshala yangaphakathi okanye iofisi, ikichen kunye nendlu yangasese
Ukuveliswa kwemoto kunye nenqanawa, upholster incar, inqanawa kunye nenqwelomoya.
Ukwenziwa kwamashishini: iprojekthi ye-antisepsis kunye nokukhuselwa kwendalo esingqongileyo, ifriji, indawo eshushu yokubumba.
kwizinga eliphezulu ibhodi PVC foamex
Ibhodi yeplastiki edityanisiweyo luhlobo olutsha lwezinto ezidityanisiweyo eziphuhliswayo kwiminyaka yakutshanje ekhaya nakwamanye amazwe.
Ngaphezulu kwe-35 %- iipesenti ezingama-70 zomgubo weenkuni, ikhetshi yelayisi, umququ kunye nezinye iintsinga zezityalo zenkunkuma zixutywe kwizixhobo ezitsha zomthi, zaze emva koko zaxutywa, zabumba, zaza zenziwa inaliti zabumba kunye nezinye iitekhnoloji zokulungisa zeplastiki zisetyenziselwa ukuvelisa iipleyiti okanye iiprofayili. Ikakhulu esetyenziselwa izinto zokwakha, ifanitshala, izinto zokupakisha kunye namanye amashishini. Ibizwa ngokuba yibhodi yeplastiki edityanisiweyo eyenziwe ngomthi ukuba iplastikhi kunye nomgubo wokhuni zixutywe kumlinganiso othile emva koko zenziwe nge-extrusion eshushu.
Ibhodi yePlastiki emnyama
Ibhodi ye-foam ye-PVC yinto eqinileyo kodwa enobunzima esetyenziswa ngokuxhaphakileyo kwimiboniso ye-POP, imiqondiso, iibhodi zokubonisa kunye nokusetyenziswa okungafumani mthwalo. Ngenxa yolwakhiwo lweeseli ezingaguquguqukiyo, sisiqwengana esilungileyo sokuprinta kwidijithali, ukuprinta kwesikrini, ukupeyinta, ukuthambisa kunye nokubhala i-vinyl.
ibhodi yegwebu emhlophe yePV
Ibhodi yegwebu emhlophe yePVC ngumgangatho ophakamileyo, ibhodi / iphepha elinamathele kakhulu le-PVC. Ifumaneka ngombala omhlophe, ethandwa kakhulu kwintengiso yamanye amazwe, ikwi-matte kunye nesiphelo esimenyezelayo kubungakanani obukhethiweyo. Inokumelana okuhle kwe-UV ngaphandle.
Umnxeba: +86 -21 -56561003
UWhatsapp: +86 18918606548
Igumbi 1003, Ukwakha 1, Lane 111, Luxiang Road, Baoshan District, Shanghai, China
Iphepha leplastiki leWPC leSintra
Sibuyele emsebenzini emva kweholide ye-CNY
Iphepha lePhepha leP foam: Intshayelelo